"Isi" Ndị mmadụ na-agụ igwefoto
Karịa 95% izi ezi
Nkwụnye ma kpọọ ka ịwụnye Igwefoto na-agụta ndị mmadụ
Ntọala njikwa obibi na ngwanrọ
Ọnụ ala na ọnụ ahịa dị mma Ndị mmadụ na-agụ igwefoto
A kọrọ dị ka "Black Tech" na Shanghai Pudong International ọdụ ụgbọ elu.
Igwefoto ndị mmadụ na-agụta bụ ngwaahịa kpakpando anyị. Awụnyere ya na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Shanghai Pudong. Shanghai TV gbara ya ajụjụ ọnụ wee too ya dị ka teknụzụ ojii, nke a bụ vidiyo maka akụkọ ahụ:
Ọtụtụ n'ime anyị Ndị mmadụ na-agụ igwefotobụ ngwaahịa ikike ikike. Iji zere mpụ, anyị etinyeghị ọtụtụ ọdịnaya na webụsaịtị. Ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị ọrụ ahịa anyị ka ha ziga gị ozi zuru ezu gbasara anyị Ndị mmadụ na-agụ igwefoto.
HP008 Ndị mmadụ na-agụ igwefoto yiri Hikvision Ndị mmadụ na-agụ igwefoto, ma MRB Ndị mmadụ na-agụ igwefoto nwere uru dị iche iche na Hikvision Ndị mmadụ na-agụ igwefoto. Ọ na-eji usoro ndekọ ọnụ ọgụgụ ndị njem dabere na vidiyo iji mee nyocha ndekọ ọnụ ọgụgụ ziri ezi na data okporo ụzọ ụlọ ahịa, nke nwere ike ịgụta ụlọ ahịa n'ụzọ ziri ezi. Ozi dị ka ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ na-abanye ma na-apụ n'ọnụ ụzọ ọ bụla na ntụziaka nke ntụgharị nke ndị mmadụ nwere àgwà nke mgbanwe siri ike, oke ziri ezi na ụgwọ ọrụ dị ala. Nyocha ndekọ ọnụ ọgụgụ dị ike nke njem njem na ọrụ njikwa nwere ike inye ọtụtụ akụkọ maka ndị ahịa, yana jikọọ na sistemụ ngwanrọ nke atọ iji nye ndị na-eme mkpebi nkwado data sayensị karịa. N'adịghị ka HikvisionNdị mmadụ na-agụ igwefoto, MRB Ndị mmadụ na-agụ igwefotonwere teknụzụ isi anọ, ya bụ teknụzụ nsuso ihe, teknụzụ ntụaka gburugburu ebe obibi, teknụzụ nchọpụta mmadụ, na teknụzụ nrụpụta trajectory. Site na nyocha nke data na-ebufe ndị njem na ọnụ ụzọ na ọpụpụ nke ebe ọ bụla, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ekenye , Usoro nhazi sayensị na nchekwa nchekwa na-enye ihe ndabere a pụrụ ịdabere na ya. Enwere ike ịtọ oge azụmaahịa nwere ezi uche dị ka okporo ụzọ ndị ahịa si dị, yana ọnụọgụ ndị mmadụ nwere ike ịtọ n'okpuru ọnọdụ pụrụ iche iji kwado njikọ mkpuchi. MRB Ndị mmadụ na-agụ igwefoto bụ nke kachasị maka nnukwu ụlọ ahịa na ndị na-ere ahịa Na-enye nkwado ọrụ nyocha maka ụlọ ahịa yinye, ebe nkiri ọha, ụlọ ngosi ihe ngosi, ụgbọ njem ọha na ebe ndị mmadụ juru.
Ọrụ nke HPC008 Ndị mmadụ na-agụ igwefoto
1. The data nwetara site Ndị mmadụ na-agụ igwefoto na-ejikọta ya na ire ere, mgbe ahụ, enwere ike ịgbakọ ọnụego ịzụrụ.
2. A na-agụta ụzọ abụọ njem njem n'ụzọ ziri ezi, a na-agụta ọnụ ọgụgụ ndị njem na-agba ọsọ, a na-ezute ọkọlọtọ na ebe dị anya.
3. Real-time mara ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na onye ọ bụla corridor ala site HPC008 Ndị mmadụ na-agụ igwefoto.
4. Mgbanwe nke n'ime njem njem nke ụlọ ahịa na nkezi njem njem.
5. Nkezi oge obibi nke ndị ọbịa.
6. The njem njem data anakọtara site HPC008 Ndị mmadụ na-agụ igwefoto ga-abụ nke miri emi, na mgbe ahụ, a ga-ejikọta data ma nyochaa ya.
7. Ọgaranya njem njem data akụkọ, kensinammuo na diversified ụdị.
8. Mgbe wụnye HP008 Ndị mmadụ na-agụ igwefoto n'ebe ọ bụla nke ụlọ ahịa ahụ, ị ​​nwere ike gbakọọ njupụta nke ndị njem na-agba ọsọ na ụlọ ahịa ahụ, nyochaa data site na akụkụ dị iche iche, ma nyochaa usoro nke njem njem.
9. Gụta ọnụọgụgụ ndị tọrọ n'ime ụlọ ahụ.
10. Akụrụngwa nke HPC008 Ndị mmadụ na-agụ igwefoto nwere ike ịrụ ọrụ njikwa obibi.
Ihe oru ngo Oke akụrụngwa Ngosipụta arụmọrụ
Ịnye ọkụ DC12～36V Mgbanwe voltaji nke 15% kwere
Oriri ike 3.6W Nkezi ike oriri
Sistemu Asụsụ eji arụ ọrụ Chinese/Bekee/Spanish
Interface ọrụ Ụdị nhazi ọrụ C/S
Ọnụego ziri ezi 95%
Mpụga interface RS485 interface Ọnụego baud omenala na NJ, netwọk igwe ọtụtụ akwadoro
RS232 interface Ọnụego baud omenala
RJ45 Ndozi ngwaọrụ, nnyefe protocol http
Mmepụta vidiyo PAL, NTSC usoro
Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ -35 ℃70℃ Na gburugburu ikuku ikuku
Okpomọkụ nchekwa -40-85 ℃ Na gburugburu ikuku ikuku
Nkezi oge ọdịda na-enweghị ọdịda MTBF Ihe karịrị awa 5,000
Ogo nwụnye 1.9-2.2m
Ihe gbasara gburugburu
0.001 lux (gburugburu gbara ọchịchịrị) ~ 100klux (ìhè anyanwụ kpọmkwem), enweghị njupụta ọkụ achọrọ, ọnụego ziri ezi adịghị emetụta ìhè gburugburu.
Ọkwa nguzogide ala ọma jijiji
Na-ezute ọkọlọtọ mba QC/T 413 "Onodu teknụzụ bụ isi maka akụrụngwa eletriki ụgbọ ala"
TS EN 62471: 2008: 2008 nchekwa foto-biological nke oriọna na sistemu oriọna
Ọkwa nke nchebe Na-ezute IP43 (ihe mkpuchi uzuzu zuru oke, mgbochi mmirijet)
Mgbasa ọkụ Mgbasa okpomoku arụrụ arụ na-agafe agafe
Ogologo dị oke egwu, dụrụ ọdụ ka ịhọrọ nnukwu oghere
Nsonaazụ ule a gbadoro ụkwụ na ndị mmadụ ruru 1.7M
Nchọpụta obosara dị irè 2M
Ndị mmadụ MRB na-agụ igwefoto HPC008 vidiyo
Anyị nwere ọtụtụ ụdị Ndị mmadụ na-agụ igwefoto, 2D, 3D, AI Ndị mmadụ na-agụ igwefoto, a na-enwe mgbe niile nke ga-adabara gị, biko kpọtụrụ anyị, anyị ga-akwado ihe kachasị mma Ndị mmadụ na-agụ igwefoto maka gị n'ime awa 24.
FAQ maka ndị mmadụ na-agụ igwefoto HPC008
1.Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti Infrared People counter na ndị mmadụ na-agụ igwefoto?
Usoro teknụzụ nke ndị mmadụ counter infrared bụ ịkpalite ndị mmadụ ka ha gụọ ọnụ site n'ibipụ ụzarị infrared. Ndị mmadụ na-agụ igwefoto bụ counter ndị mmadụ na-agụta ndị mmadụ site na ịnakọta eserese maka ntụnyere na ikpe. N'ezie, teknụzụ dị iche. N'ikwu okwu n'ozuzu, izi ezi nke ndị mmadụ na-agụ igwefoto dị elu karịa nke counter infrared ndị mmadụ.
2.Ndị a na-agụ igwefoto na-akwado WiFi?
A na-akwado ma netwọk wired na ikuku.
3.N'ihi na njem eruba data nke ndị mmadụ na-agụ igwefoto, m chọrọ iji nke m software ịgụ ya kama gị software. Kedu ihe m kwesịrị ịme?
Anyị ga-enye protocol na API dị ka mkpa gị siri dị, wee nyere ndị ọkachamara gị aka ka ha jikọọ akụrụngwa anyị na sistemu gị nke ọma, iji jiri ngwanro gị lelee ma jiri data.
4.What bụ mgbe-ahịa nkwado nke a agụta igwefoto? Ogologo oge ole, Warranty? Gịnị bụ teknuzu uru nke ndị a na-agụ igwefoto?
Anyị na-arụ ọrụ na ndị a na-agụta ụlọ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka 20 afọ. Anyị ga na-enye mgbe-ahịa nkwado. Ị nwere ike ịchọta anyị n'oge ọ bụla site na webụsaịtị, email ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ. Maka akwụkwọ ikike, ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-akwado naanị otu afọ. Anyị nwere ntụkwasị obi zuru oke na ngwaahịa anyị. Anyị na-enye akwụkwọ ikike maka ihe dị ka afọ 2-3. Ọ bụrụ na ị bụkwa onye nnọchi anya anyị, anyị na-enye ọrụ ikike ruo mgbe ebighi ebi iji kwado mmepe na mmezi nke ndị ọrụ niile na azụmaahịa mpaghara ruo oke.
5.Ebee ka a na-emepụta igwefoto ndị mmadụ? Iji ere ka Kedu obodo? Enwere ikpe nrụnye kpochapụwo?
Dị ka ndị ọkachamara na-emepụta ihe na-emepụta ihe, n'ime afọ 20 gara aga, anyị erewo ngwaahịa anyị na mpaghara ndị dị mkpa dị ka mkpọsa, njem nlegharị anya na njem n'ụwa nile iji nyere aka na nchịkọta data na nyocha. Ikpe kacha ochie bụ na ndị mmadụ HPC008 anyị na-agụ igwefoto bụ nke ọdụ ụgbọ elu Shanghai Pudong nakweere iji dozie nsogbu nke iwepụta ogologo oge iji tagzi. A na-akpọ ya "teknụzụ ojii" site na akụkọ Shanghai. Anyị nwere mmeghe a kapịrị ọnụ na vidiyo YouTube dị n'elu.
6. Kedu maka Ndị mmadụ counter ọnụ ahịa? Kedu otu m ga-esi nweta ọnụ ahịa ka mma?
E jiri ya tụnyere otu ngwaahịa ndị dị na mba ndị ọzọ, ngwaahịa anyị nwere uru nke nkà na ụzụ dị elu, ọnụ ala dị ala, ntinye dị mfe na ọrụ zuru oke mgbe ire ere. Ọnụ ahịa ọnụ ahịa anyị zuru oke sitere na iri puku kwuru iri na narị dollar. Maka nkọwa, biko kpọtụrụ ndị ọrụ ahịa anyị, ndị ga-enye gị nkọwa zuru ezu.
7. Ndị a na-agụ igwefoto ọ dị mfe ịwụnye?
Nwụnye dị nnọọ adaba. Naanị ị ga-edozi isi na kposara, na ngwaahịa ahụ nwere ike ịrapagidesi ike na isi. Igwe netwọkụ na ọkọnọ ike bụ nkwụnye na egwu. Enwere ike imecha nwụnye n'ime nkeji ise.
8. Enwere m ọtụtụ ụlọ ahịa yinye. Ndị mmadụ a na-agụ igwefoto nwere ike ịme ọnụ ọgụgụ etiti? Enwere m ike ịme nyocha nchịkọta?
N'ezie, e mere ngwaahịa anyị maka ụlọ ahịa yinye. Akụrụngwa dị ike nke ukwuu ma nwee ọtụtụ ọrụ, dị ka mpaghara nkewa, ụlọ ahịa nkewa, ịkọwapụta ikike, njikwa ọrụ, njikwa mmeghe na mmechi, nchịkọta oge nkekọrịta, wdg ma ọ bụrụ na ị nwere mkpa ndị ọzọ, anyị nwekwara ike hazie dị ka mkpa gị si dị. .
9. N'ime oge ọrịa na-efe efe, obodo anyị kwesịrị ịme njikwa mmachi. Enwere m ike iji ndị gị na-agụ igwefoto maka njikwa mmachi ndị ọrụ?
Na mbido 2020, anyị ewepụtala sọftụwia na-amachi ugbu a maka ọnọdụ ọrịa na-efe efe. Ndị na-ahụ maka ndị mmadụ niile nwere ike ịghọta njikwa ndị ọrụ. Ngwanrọ na-ahụ maka obibi ugbu a nwekwara ọrụ dịka imeghe ọnụ ụzọ na njikwa mmechi, mkpu na ihe ndị ọzọ.
10. Enwere ụdị ndị ọzọ ndị mmadụ na-agụ igwefoto n'ime ụlọ ọrụ gị, dị ka ndị 3D na-agụ igwefoto?
N'ime afọ 20 gara aga, dị ka onye na-eweta ndị mmadụ, anyị nwere ọtụtụ usoro, dị ka infrared ndị mmadụ counter, 2D ndị mmadụ counter, 3D ndị mmadụ counter, AI ndị counter, na ọtụtụ ngwaahịa n'ihi na ị na-ahọrọ na, si ọnụ ala ka dị oké ọnụ. site na mfe ruo Hi-tech. Enwere otu maka gị mgbe niile.
11. Enwerem ugbo. Achọrọ m ịgụta ehi na atụrụ, enwere m ike?
N'ezie, ndị AI anyị na-agụ igwefoto nwere ike mụta onwe ya nke ọma site na ihe dị iche iche, wee jiri ya tụnyere ma gụọ ihe ndị ahụ.
12. Ebe ị nwere ọtụtụ ụdị counter ndị mmadụ, achọrọ m ire ngwaahịa gị na obodo m, ọ dị mma? Gịnị bụ usoro?
Anyị na-anabata ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile iji kparịta ihe gbasara ụlọ ọrụ. Ka anyị rụkọọ ọrụ ọnụ iji kwalite ndị mmadụ na-agụta n'ọdịnihu mara mma. Biko kpọtụrụ ndị ọrụ ahịa anyị maka ndụmọdụ gbasara usoro a kapịrị ọnụ. Daalụ maka ntụkwasị obi gị!
Nke gara aga: Igwefoto ọgụgụ isi MRB HPC010
Osote: Onye nrụpụta ODM China Custom Eletrik Checkout Counter maka Supermarket
Igwefoto na-agụta isi
Igwefoto ọgụgụ isi MRB HPC010
MRB 3D Ndị mmadụ na-agụta sistemu HPC009
MRB AI igwe igwe HPC198